Kooxda al-Shabaab oo ah koox ka been sheegtay diinta Islaamka iskana dhaadhicisay in ay kaligood Muslim yihiin, Soomaalida kalana u haysata dad gaalo ah ama ka ridoobay diinta Islaamka waxay dalka Soomaaliya lagu arkay markii ugu horaysay sagaashameeyadii.
Hadda waxaa meelo ay ku dhuumaalaystaan oo dalka ka mid ah ka socda Beegsi qurux badan oo aan waxba lagu yeelaynin dadka weli ku hoos nool al-Shabaab, taas oo lagu bartilmaan beegsanayo amiirada iyo horjoogayaasha kooxdaas, arintaas oo ay fulinayaan cutubyo ciidamada geesiyiinta ah ee soomaaliyeed iyo dalalka Saaxiibada la ah oo daqiiqad iyo saacad kasta lagu qaarjinayo xubno sar sare oo qawlaysatada al-Shabaab ka tirsan.
Haatan waxaa loogu galayaa god kastoo ay galaan, dhiibatooyinka ay ku hayaan dadweynaha Soomaaliyeed, sida dilalka, boobka hantidooda iyo qaraxayada ay la beegsadaan shacabka Soomaaliyeed dhawaan way dhammaani doonaan.
Ummadda Soomaaliyeed waxay mudan tahay nabad iyo horumar oo ay hor taagan tahay kooxda al-Shabaab. Kooxdaas dhiig-cabtada ah waxay ummadda u diidday nabad, nolol iyo horumar.
Haatan waxaa si toos ah loo fahmay in al-Shabaab aysan diin haysan waxayna dadka kasoo goostaan Shabaab sheegeen in lagu qalday diinta Islaamka oo aysan aqoon fara badan u lahayn, islamarkaana ay run moodeen, waxaaney intaasi raaciyeen in ay maanta ka shalaayayaan wixii ay Soomaalida kale u gaysteen.